Waydiimo – BAXNAANO
Hoos waxaad kaheleysaa su'aalaha la xiriira Barnaamijka Baxnaano
1. Muxuu yahay barnaamijkani?
Barnaamijka Qaran ee Caawinta Dadka Nugul waa barnaamij dowladeed oo la gaarsinayo qeybaha ugu nugul bulshada iyada oo lacago la siinayo.
2. Goorma ayaa diiwaangelinta Baxnaano la xiri doonaa?
Diiwaan galintu hada waxay ka socotaa inta badan dalka waana la xiri doonaa marka degmo kasta ay gaarto ka-faa’iideystayaasha bartilmaameedka ah.
3. Immisa ayey qoyskiiba ka helaan taageerada Baxnaano?
Kaarka Baxnaano ayaa loo qaybinayaa qoys kasta oo loo arko inuu u qalmo. Kaarka waxaa lagu soo dallacayaa saddexdii biloodba mar 60USD ($) qoyskiiba ($ 20 Bil kasta). Qaddarkani wuxuu ku filnaan doonaa inuu daboolo qaar ka mid ah baahiyaha muhiimka ah ee qoyska, oo gacan ka geysanaya bixinta xasilloonida, hoy ku filan iyo cuntada miiska saaran.
4. Muddo intee le'eg ayay caawinaadu socon doontaa?
Qoysaska u-qalma ayaa sii wadi doona inay helaan gargaarka illaa iyo inta ay u-qalmayaan iyo illaa iyo inta laga helayo inay baahan yihiin. Maalgalinta ayaa hada socota si loo taageero barnaamijkan kaalmaynta ah ilaa dhamaadka Disember 2020. Sikastaba, waxaa lafilayaa in barnaamijku uu socon doono ilaa dhamaadka 2022
5. Hay'addee ku lug leh hirgelinta BAXNAANO?
Wasaaradda Shaqada iyo Arrimaha Bulshadu waxay qandaraasyo adeegyo la saxiixatay WFP si ay u taageerto hirgelinta Qeybaha 1. WFP waxaa loo xushay inay ka taageerto FGS hirgelinta xawilaadaha lacagta (Qeybta 1) iyadoo ay ugu wacan tahay khibradeeda iyo raadraaca ay ku leedahay hirgelinta xawaaladaha lacagta ku saleysan ee Soomaaliya iyo adduunka.
6. Ka waran qoysaska ku nool xeryaha barakacayaasha?
Qoysaska ku nool kaamamku xaq uma laha BAXNAANO xilligan. Baxnaano wuxuu diiradda saarayaa ugu horreyn meelaha miyiga ah, kuwaas oo inta badan aan helin taageero.
7. Maxaa lacag looga dhigay?
Sababtoo ah waxay siinaysaa dadka xulasho, waxay u keentaa dareen caadi ah waxayna awood u siinayaan inay maareeyaan mudnaanta qoyskooda si ay u kala hormarsadaan baahiyahooda muhiimka ah.
8. Immisa ayey xaq u leedahay BAXNAANO?
BAXNAANO waxay wadar ahaan lagu maalgaliyey $ 65 milyan oo ay bixisay xarunta Bangiga Adduunka ee IDA ee bixinta deeqaha.
Baadh balooggeena si aad uhesho qoraallo xeel-dheer, Tilmaamo iyo Sheekooyin ku saabsan Guulaha Barnaamijka.
Wajiga labaad ee mashruuca taageerraya Qoysaska Ayaxa saameeyay oo la daahfuray
Baydhabo , November 6, 2021- Munaasabad ka dhacday magaalada Baydhabo ee Dawlad-gobolleedyada Koonfurgalbeed ayaa Sabtida maanta 6 bisha November, 2021 […]
Dawladda Federaalka iyo Dawlad-gobolleedyada oo xoojinaya iskaashiga dhammeystirka Diiwaanka mideysan iyo xog-keydiyaha Bulshada
Muqdisho, November 3, 2021- Shir wadatashi ah ayaa maanta uga furmay Muqdisho , wasaaradda Shaqada iyo Arrimaha Bulshada Xukuumadda Federaalka […]
Garoowe , November, 17, 2020 – Wasiirka Shaqada iyo Arrimaha Bulshada Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Duraan Axmed Faarax oo socdaal […]